Madaxda ka qaybgalaysa Shirka London oo isku raacay in Soomaaliya uu ka jiro isbadal dhanka Hormarka ah. – Xeernews24
Madaxda ka qaybgalaysa Shirka London oo isku raacay in Soomaaliya uu ka jiro isbadal dhanka Hormarka ah.
11. Mai 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay furtaanka shirka. Madaxweyne Farmajo wuxuu sheegay in dowladdiisu ay dadaal badan ku bisay Bad baadinta dadka Soomaaliyeed oo ay Abaaruhu saameeyeen, wuxuuna u mahadceliyay Beesha Caalamka iyo Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibadiisa.
Farmaajo ayaa sheegay dowladdu inay dagaal kula jirto seddex Cadow oo kala ah Argagixisada, Musuqa iyo Faqriga, wuxuu sheegay in Caalamka ay ka codsanayaan in Soomaaliya laga qaado Cuna qabataynta Hubka ee Saaran.
>Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay António Guterres ayaa shirka ka sheegay in Qaramada Midoobay ay diyaar u tahay inay laba jibbaarto dadaalada looga hortagayo macluusha Soomaaliya, Soomaaliya isagoo sidoo kale Cadeeyay in Soomaaliya ay ka taageerayaan dhinac kasta.
>Ra’iisal wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay in dalkeeda Soomaaliya uu siin doono taageero badan iyadoo si gaar ah u cadysay in UK bixin doono 21 milyan oo gini dhismaha iyo tababarka ciidan qaran.
>Moussa Faki Maxamed oo ah Madaxa Midowaga Afrika ayaa ayaa ku ammaanay dowladda Soomaaliya dadaalka ay ugu jirto dib u xoraynta Dalka, wuxuuna tilmaamay in haatan la wiiqay Awooda Al-Shabaab.
>Madaxweynaha dalka Uganda Yuweri Museveni, ayaa sheegay in dalkiisu yahay Dalkii Ugu horeeyay ee Soomaaliya u dira Ciidamo, haatana loo baahanyahay in Soomaalidu ay la timaado siyaasad ku dhisan Wadaniyad.
>Uhuru Kenyatta, oo ah Madaxweynaha kenya ayaa ka hadlay Asna dagaalka lagula jiro Maleeshiayada Al-Shabaab oo ay wadaan Ciidanka AMISOM, wuxuuna Sheegay inay muhiim tahay in la sii xoojiyo taageerada ciidamada Midowga Afrika.
>R/wasaaraha Wadanka Itoobitya Desalegn ayaa asna dhankiisa ka hadlay sida ay xiligaan Muhiimka u tahay in la sii tayeeyo lana dhiso ciidanka Qaranka Soomaaliya, wuxuuna sheegay si taas loo gaaro inay muhiim tahay in Soomaaliya laga qaado cuna qabataynta Hubka ee Saaran.
Sidoo kale waxaa jira Madax badan oo kale oo Shirkaan Khudbado ka jeediyay kuwaas oo cadeeyay inay Soomaaliya xiligaan horay u socoto loona baahanyahay in la sii taageero si dadaalada dowladdu wado ay u guulaystaan.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/05/For-SONNA-640x480-640x480.jpg 480 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-05-11 19:23:032017-05-11 19:23:03Madaxda ka qaybgalaysa Shirka London oo isku raacay in Soomaaliya uu ka jiro isbadal dhanka Hormarka ah.
Farmaajo Anaga waan midownay idinkana midooba +VIDEO+SAWIRRO War Murtiyeed Arrimaha Soomaalia ee London lagu soo gebagebeeyey.